Smadav v10.1 PRO + Keygen Full Version - Software Guide
Home / Antivirus / Smadav v10.1 PRO + Keygen Full Version
Smadav v10.1 PRO + Keygen Full Version Reviewed by Ko Lin on 8:50:00 AM Rating: 5
Smadav v10.1 PRO + Keygen Full Version
Ko Lin 8:50:00 AM Antivirus
Smadav v10.1 PRO Full Version + Keygen Activator
ကျွန်တော့် အကြိုက်ဆုံး Antivirus ပေါ့ဗျာ။ Feb-12 က Version အသစ်ထွက်လာလို့ တင်ပေးလိုက်ပါ တယ်။ Antivirus Software တွေမတင်ပေးရတာကြာလို့ မွှေမွှေနှောက်နှောက် ရှာဖွေလိုက်တာ Smadav Antivirus 2015 10.0.0 Pro ဆိုတဲ့ Antivirus Software လေးတစ်ခုတွေ့တယ်ဗျာ။ Windows OS မှာ ကပ်ငြိဒုက္ခပေးနေ တဲ့ Virus အမျိုးအစားတွေအများကြီးကို ရှာဖွေသတ်ပေးနိုင်ပြီး Task Manager ခေါ် မရတာ၊ Registry ကိုပိတ်ထားတာ၊ ဖိုင်တွေ Hidden ဖြစ်နေတာတွေကို ဒီကောင်နဲ့ ချက်ချင်း ဝင်ရောက် ထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။ Signature ပေါင်း 8296 မျိုးကို သုတ်သင်ရှင်းလင်းဖို့ ထည့်ပေးထားပါတယ်။ Pro Version အတွက် Update တွေရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပြီး လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံ မှာ ခေတ်စားနေတဲ့ Shortcut Virus, Wind32, Sality ကိုတော့ အထူးနှိမ်နင်းပေးပါတယ်။ အဲဒီ Antivirus ကိုကျွန်တော်လိုချင်နေတာ ကြာပြီဗျ။ ဓါတ်ပုံဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ သူ့ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို ကြည့်ကတည်းက သဘောကျနေတာပါ။ ဒီ Antivurus ကိုမနေ့ညက နည်းနည်းကလိကြည့်လိုက်တာ သူ့ရဲ့ Protection တွေကိုအတော်လေး သဘောကျ လို့ အခြားသောသူငယ်ချင်းတွေ အသုံးပြုနိုင်အောင်လို့ပြန် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ကွန်ပြူတာထဲသို့ USB ထိုးလိုက်တာနဲ့ USB ကိုအသေးစိတ် Virus Scan ဖတ်ပေး နိုင်တာ တော်တော် မိုက်တယ်ဗျာ။ သူ့ရဲ့ Feature တွေကလည်းအများကြီးပါ။ USB Virus Scan သာမက PC တစ်ခုလုံးကိုပါ Virus Scan လုပ်ပေးနိုင်ပါ တယ်ဗျာ။ Full Version အသုံးပြုနိုင်အောင် Serial Key ကိုပါထည့် သွင်းပေးထားပါတယ်ဗျာ။ Windows XP/Windows Vista/Windows 7/Windows 8 32-bit and 64-bit (x86 and x64) အစရှိတဲ့ Window OS တိုင်းမှာအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဗျာ။
Activation လုပ်ဖို့ အင်တာနက်ပိတ်၊ Smadav ကိုဖွင့်. Manage ကိုနှိပ်. ညာဘက်မှာ နာမည်နဲ့ ကီးကို ဖြည့်နိုင် ပါတယ်.. အင်တာနက်ဖွင့်ထားရင်တော့ Pro မဖြစ်ပါ.. Free Version မှာတောင်မှ Invalid ဖြစ်ပြီး အမဲရောင်ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်...၊၊
Smadav merupakan anti virus lokal yang sangat populer dan dikategorikan sebagai anti virus lokal terbaik yang pernah ada, dan para penggunanya pun sangat banyak. Dengan Smadav anda dapat scan, mencegah bahkan mengobati PC/komputer anda yang sudah terinfeksi oleh virus.
Download dan instal anti virus lokal terbaru Smadav v10.1 Pro Full Version + Keygen Activator dan cegah PC anda dari ancaman dan serangan virus.
Download Smadav v10.1 PRO+Keygen Full Version